Global Aawaj | युरोकपमा आज तीन खेल, को-को भिड्दैछन् ? युरोकपमा आज तीन खेल, को-को भिड्दैछन् ?
युरोकपमा आज तीन खेल, को-को भिड्दैछन् ?
४ असार २०७८ 10:32 am
काठमाडौं । १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज तीन खेल हुँदैछ । समूह चरण अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा स्विडेन र स्लोभाकियाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समूह ‘ई’ मा रहेको दुई टिमबीचको खेल साँझ ६:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
आज स्लोभाकिया लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ । पहिलो खेलमा स्लोभाकियाले पोल्याण्डलाई २-१ गोल अन्तरले हराएको थियो । स्लोभाकिया समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ । स्विडेन पहिलो जितको खोजीमा छ । पहिलो खेलमा बराबरी खेलेको स्विडेन १ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ । दोस्रो खेलमा क्रोएसिया र चेक रिपब्लिक आमुनेसामुने हुँदैछन् । दुई टिमबीचको खेल राति ९:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
समूह ‘डी’ मा रहेको क्रोएसिया पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ । पहिलो खेलमा क्रोएसिया इंग्ल्यान्डसँग १-० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो । क्रोएसिया समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । चेक रिपब्लिक भने लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ । पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिकले स्कटल्याण्डलाई २-० ले हराएको थियो । चेक रिपब्लिक ३ अंक जोडेर समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
आजै हुने तेस्रो खेलमा इंग्ल्यान्ड र स्कटल्याण्डबीच भिडन्त हुनेछ । इंग्ल्यान्ड र स्कटल्याण्डबीचको खेल राति १२:४५ बजे सुरु हुनेछ । समूह ‘डी’ को इंग्ल्यान्ड लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ । इंग्ल्यान्ड ३ अंक जोडेर समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ । स्कटल्याण्ड भने पहिलो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ । पहिलो खेलमा स्कटल्याण्ड चेक रिपब्लिकसँग स्तब्ध भएको थियो ।